Zvikonzero Zvishanu Zvekuti Unofanira Kutenga Vana Vako Webkins Mhuka - TMC App
Ndiwe here amai nababa vemwana anofarira matoyi eumbozha uye anofarira kushandisa webhu kutamba mitambo inonakidza, yakachengeteka? Kana uri, ungashuvira kufunga nezvekutenga zvipfuyo zveWebkins, zvakare zvinopereterwa Webkinz, zvemwana wako.
Zvakanaka sekunzwa kuti mhuka dzemhuri dzeWebkins dzakanaka uye dzakatsvinda kuvana, unogona kunge uchitsvaga rumwe ruzivo. Iwe unogona kunge uchida kuziva kuti sei uchifanira kutengera mwana wako. Kuti zvikuitire nyore, 5 zvikonzero zvaunoda kutengera Webkins mhuka dzinovaraidza dzemwana wako dzakatsanangurwa pazasi.
Usati watarisa zvikonzero nei uchifanira kutenga mhuka dzeWebkinz dzemwana wako, zvakakosha kuti uzive kuti chii. Mhuri dzeWebkinz mhuka dzinovaraidza dzinouya mune akati wandei magadzirirwo, anosanganisira shumba uye pandas. Iyi kodhi inogona kushandiswa pasaiti uye mwana wako anogona kumbundira chaiyo vhezheni pamhuka yavo yakapfava.
Kana zvasvika kune nei uchifanira kutengera Webkins mhuka dzemwana wako, ndapota enderera mberi uchiverenga.
1- Ivo Vanodhura Zvinodhura
Kazhinji, unozadza kuwana kuti Webkinz yakasarudzika pet ine mutengo weti inosvika madhora gumi nemashanu kana pasi. Mazhinji ematoyi emagetsi mazuva ano ane mutengo wakakwira, ane mutengo wemadhora makumi matatu kana anopfuura uye izvo hazvitombosanganisi nemutengo wemamwe mabhuku kana makatuji.
2- Matoyi maviri eMutengo Weimwe
Pamusoro pekuwana mhuka yakazara, ine umbozha, mwana wako anowanawo mukana kune inonakidza, asi yakachengeteka yepasirese yenyika. Paunenge uchinge waongorora zvese izvo mwana wako anowana pawebhusaiti yeWebkinz, unogona kushamisika nekungodhura kwakaderera uye kutengeka zvese.
3- Yakanakira Vana Vese Mazera
Zvinoenderana newebhusaiti yeWebkinz, webhusaiti yavo yakagadzirirwa vana vane makore matanhatu zvichikwira. Kana uine mwana mudiki, semwana mudiki kana mwana mudiki, vanogona kungoshuvira kuve nemhuka inoyevedza inoyevedza.
4- The Online, Virtual World Inonakidza
Sezvaratidzwa pamusoro, mwana wako anogona kugadzira KinzCash, iyo inogona kushandiswa kubatsira kuchengeta mhuri yavo yemhuka. Kune vanhu vakuru vakawanda, kuwana mari ibasa, asi kuvana kunogona kuva mafaro akawanda. Pane nzira dzakasiyana-siyana dzekuti mwana wako awane "mari," kubhadhara kuchengetwa kwemhuri yavo yakambundirwa.
5- Webkins Mhuka Inogona Kudzidzisa Basa
Mwana wako anozoda kushandisa KinzCash yavo kutenga zvigadzirwa zvemhuri yavo yemhuka. Webkins mhuri dzinovaraidza uye saiti ichabatsira kudzidzisa mwana wako nezvechinangwa chekumisikidza, mabasa, uye manejimendi emari.
Kuti zvikuitire nyore, zvinhu zvishanu nei uchifanira kutengera Webkins mhuri dzinovaraidza kumwana wako zvakanyorwa pazasi.
Usati watarisa zvikonzero nei uchifanira kutengera mwana wako mhuka dzeWebkinz, zvakakosha kuti uzive kuti chii. Sezvakataurwa pamusoro apa, mwana wako anogona kugadzira KinzCash, iyo inogona kushandiswa kubatsira kuchengeta chipfuyo chavo. Mwana wako anozoda kushandisa KinzCash yavo kutenga zvigadzirwa zvemhuri yavo inopfuyo. Webkins mhuka dzinovaraidza uye webhusaiti ichabatsira kudzidzisa mwana wako nezvechinangwa chekumisikidza, mabasa, uye kutonga kwemari.
Tarisa uone Aya Mafungiro eIndasitiri Yako Realty July 2, 2022
Kudzingirira kadhi reChase Charge? June 25, 2022
Chase Kiredhiti Kadhi Inokupa Iwe Yakasarudzika Yakasiyana June 18, 2022
Kugadziridza Inzwi Kuita Mari NeE-Kudzidza June 11, 2022
Kuita mari neAmerican Express Blue Mari yeSevhisi June 4, 2022
Tora Mari (129)
Vamwe vari kuverenga:AppleunlockTmc appAppleunlockerMaitiro ekuona chiitiko parouta yakoNu votSpymaster proVolte sip meseji sms kubata uye kuteereraNyika dzaunogona kushanyiraBhjkwuyvMaganin karatu